प्रीटि जिन्टा र रानी मुखर्जीको दोस्ती किन टुट्यो ? - The Public Today
कोरोना कहर कोरोना भाइरस कोभिड-१९ जनचासो ब्रेकिङ्ग न्यूज कोरोनाको कहर विचार कोरोनाको त्रास
प्रीटि जिन्टा र रानी मुखर्जीको दोस्ती किन टुट्यो ?
१ श्रावण २०७७, बिहीबार १२:५७
साउन १ गते : बलिउडमा जति छिट्टो सम्बन्ध बन्छ त्यति नै छिट्टो टुट्छ पनि । फिल्म उद्योग एउटा परिवार हो तर यसमा गुट र उपगुटको षड्यन्त्र चल्ने गर्छ । अझ एउटै फिल्ममा दुई वा दुईभन्दा बढी अभिनेता तथा अभिनेत्री सामेल भएको खण्डमा एकअर्कासँग मनमुटाव शुरु हुन्छ । कहिलेकाँही भनिन्छ, अभिनेत्रीहरु एक अर्कासँग साथी नै बन्न सक्दैनन् । यद्यपि, बलिउडमा केही अभिनेत्रीहरुले यो भनाईलाई गलत साबित गरिदिएका छन् । जसमा रानी मुखर्जी र प्रीति जिन्टाको नाम आउँछ ।
९० को दशक र २००० का उत्कृष्ट अभिनेत्री हुन्, प्रीति र रानी । यी दुईले थुप्रै फिल्ममा एकसाथ काम गरे । त्यति मात्र होइन यी दुईबीच गहिरो दोस्ती पनि बन्न सफल भयो । यी दुईले जति पनि चर्चित फिल्ममा काम गरेर दर्शकको मन जिते त्यसैगरी यी दुईको दोस्ती पनि धेरैलाई उदाहरणीय लाग्न थाल्यो ।
रानी मुखर्जी काजोलकी नातेदार हुन् । रानीका नातेदार भाई पनि बलिउडका चर्चित निर्देशक हुन् । तर, प्रीतिको पारिवारिक पृष्ठभूमि फिल्म क्षेत्रको होइन । त्यसैले प्रीतिले आफूलाई सधैँ ‘आउटसाइडर’ मान्ने गर्थिन् भने रानीको दोस्ती आफूसँग भन्दा पनि ऐश्वर्यासँग बढी भएको आभाष गर्ने गर्थिन् । रानी र ऐश्वर्याको पनि गहिरो सम्बन्ध थियो । रानीले प्रीति र ऐश्वर्या दुवैसँग नजिकको सम्बन्ध थियो । तर, विस्तारै फिल्म क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा हुने क्रममा यी तीनै अभिनेत्री को–स्टार बनेर रहे ।
विस्तारै रानी र प्रीतिको बीचमा दरार पैदा भयो । उनीहरु एकअर्कालाई एक अर्काको तारिफ सुन्न पनि गाह्रो हुन थाल्यो । यश चोपडाको फिल्ममा रानी र प्रीति चुनिन्थे । र, रानीलाई प्रीति उत्कृष्ट अभिनेत्री हुन् भनेर सुन्नमा नै डाह हुन थाल्यो । एक पटक रानीले खुलेरै दुई अभिनेत्रीबीच दोस्ती हुन नसक्ने बताएकी थिइन् । एजेन्सी
वीरगन्जमा मृत्यु भएका दुवै जनामा कोरोना पुष्टि
रियाको कल रेकर्डमा आमिर खानका तीन म्यासेज
भूमि पूजनमा सहभागी महन्तलाई कोरोना संक्रमण, स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै
जिप्रका धनुषाको अत्यावश्यक सेवाबाहेक सबै सेवा बन्द हुने
बोल्न नसक्ने महिलामाथि सामूहिक बलात्कार, ढाकछोप गर्न चलखेल
रांगाभैँसी नियन्त्रणमा लिन स्थानीय र प्रहरी बिच झडप, १५ राउण्ड हवाई फायर
भोली रातिदेखि महोत्तरीको गौशालामा पनि ‘लकडाउन’ हुने
ओम अस्पतालमा मृत्यु भएकी धनुषाको लालगढकी महिलामा कोरोना पुष्टि
महोत्तरीमा कोरोना संक्रमणबाट थप एकको मृत्यु
धनुषामा खाल्डोमा डुबेर एक युवकको ज्यान गयो
महोत्तरीको औरही नगरपालिकामा अनिश्चितकालका लागि ‘लकडाउन’